Guddiga Doorashooyinka oo diiday Guushii Xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guddiga Doorashooyinka oo diiday Guushii Xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon
Guddiga heer qaran ee doorashada dadban ayaa ka soo horjeestay waxba kama jiraana ku tilmaamay doorasho qeyb ka aheyd kuraasta xubnaha aqalka hoose oo shalay ka dhacday magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug.
Beesha Saleebaan/Gaabane oo laheyd kursigan ayaa waxaa ku guuleystey musharax Maxamed Axmed Abtidoon oo ay wadatay madaxtooyada Soomaaliya, waxaana horey ugu fadhiyey oo doorashada qaadacday Caasho Xaaji Cilmi.
Qoraal ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer Qaran Avv. Cumar Maxamed Cabdulle ayaa lagu sheegay in guddiga doorashada heer Federal aysan aqbali doonin natiijada ka soo baxday doorashadaas, isagoo sababtana ku sheegay in kursigaas ay uu qeyb ka ahaa qoondada %30 ee dumarka loogu talo galay.
Qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada heer federal ayaaa u qornaa sidatan:-